Isiqalo sokubhala umbhalo wokuziqambela | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Home Explore Isiqalo sokubhala umbhalo wokuziqambela
Isiqalo sokubhala umbhalo wokuziqambela
Uma uqala umsebenzi wokubhala, kukhona imininingwane okufanele uyicabange ukuze umbhalo wakho ube nenjongo ecacile.
Uma ungakabi nesiqiniseko, joyina iqoqo elifunda ngokuba ngumbhali. Ake ahlangane amaqoqo abantu aye emihlanganweni ebizwa ngama ‘Writer’s Workshops’. Loku kuzosiza ekukuqaliseni onyaweni oluhle.
Asiqale ngokubalulekile-ke. Nanka amaphoyinti ambalwa uma uzoqala lo mzila wokubhala ngokuziqambela. Zibuze le mibuzo elandelayo:
Yiluphi uhlelo noma isitayela ozobhala ngaso?
Ziningi izindlela noma izitayela ongakhetha kuzona uma ubhala. Qala ngokunquma ukuthi uzobhala inganekwane noma okuyiqiniso. Qhubeka ukhethe uhlelo olulandelayo. Ubhala inkondlo, indatshana emfushane noma ubhala inoveli ephelele? Yi-eseyi noma yincwadi ezoba yinde ephelele? Izofana nezinkondlo zothando zikaShakespeare noma izofana nencwadi kaMongameli osewadlulayo uNelson Mandela iLong Walk to Freedom? Uzobe uphosa esivivaneni sencwadi ephelele ezoba nabanye ababhali noma ubhala eyakho incwadi? Uma usucaciselekile ngaloku qhubeka ucabange ngesikhathi okufanele uphothule ngaso lomsebenzi wakho wokubhala.
Lombhalo udingeka ngokushesha noma awujahekile; noma uzokubophezela isikhathi eside (iprojekthi yesikhathi eside)?
Uma uzokubophezela umudwa wesikhathi wokuphothula izahluko; uma kumele uqede maduzane, sheshisa uqale uqalaze ufune izibonelo zamaphrojekthi akuzungezile, ukuze ube nomqondo wokuthi kufunekani nokuthi ungaqala kanjani.
Khumbula ukuthi uzofuna ukuphindela ekuqaleni, uvakashele imibhalo oqale ngayo. Ngakho-ke, kumele unikezele isikhathi esanele emsebenzini wakho wokubhala noma ulindele ukuthi uzophothula ngesikhathi esifushane, noma uma ubona ukuthi uzobophezeleka isikhathi esithe ukuba sijana.
Umbhalo wakho unomgomo wokufundisa, wokufaka ugqozi noma wokunandisa/wokujabulisa?
Lo mbhalo ozowubhala ngowokunandisa kuphela noma owokufaka ugqozi noma owokufundisa? Lokhu kubalulekile ngoba okuqukethwe umbhalo wakho kumele kucace, umfundi kumele awubambe umqondo futhi akwazi ukulangazelela isiphetho somqondo. Ukucacisa kusiza nawe njengombhali kulomzila futhi kunciphisa isikhathi ongasichitha uphindela emuva ulungisa futhi ushintsha okungacacile.
Ingabe ulindele inkokhelo noma lo mbhalo uwenza njengomsebenzi wothando?
Ingabe ubhala ngoba ufuna ukwenza imali nokushesha? Uma kunjalo, ungazithola unenkinga. Ukubhala akusibona ubuciko obuletha imali ngokushesha. Kufuna isineke nokuzikhandla nokunakekela ubuchwepheshe, uphikelela uloku uwenza ube ngcono umbhalo.
Thola isikhala nendawo ekufaka ugqozi
Nami ngiqale lolu hambo lokuba ngumbhali kodwa anginawo umudwa wesikhathi. Ngithole ukuthi izikhala nezindawo ezingigqugquzelayo zithulile kodwa zinabantu nomculo opholile omnandi. Ngesinye isikhathi kungaba ukuthula okuthe du phakathi kwamabili, ekuseni kakhulu. Ngesinye isikhathi inkumbulo noma umqondo ungavela ungafika umatasatasa wenza umsebenzi wakho wosuku. Qaphelisisa osukwini lwakho ukuthi ukuthi sifika nini isikhathi lapho ugqozi nethuba kuhlangana khona.
Ekugcineni, phatha incwajana yokubhala noma ikuphi lapho oya khona
Lokhu kuzosiza ezikhathini lapho kufika umqondo kodwa umatasatasa kakhulu noma unesikhathi esincane kakhulu sokubhala. Lesi isixazululo esiyinsiza kakhulu, kakhulukazi uma ungumuntu ohlale esendleleni; ngoba izikhal, abantu nezingxoxo ozizwayo zivusa ugqozi ngesikhathi uqhubeka nosuku.
Lena imibuzo okufanele uyiphendule ngaphambi kokuthi uqale ukubhala imicabango yakho. Izimpendulo zizokusiza zikuqondise, zinikeze isimo kulomzila wokubhala, ozothi ekugcineni ucacise umgomo.